Tsy mampatavy ny mihinan-kanina
Tsy mahangeza ny mihinan-kanina …
Mila hery ny vatana mba hahafahantsika miaina. Iny hery iny dia alainy ao anatin’ny sakafo izay hanintsika. Izany hoe, « mila mihinana mba hiainana ».
Rehefa noana isika, mampahafantatra antsika izay ny vatana fa mila hery indray izy. Izay no antony tokony hihinanan-kanina rehefa noana.
Rehefa miaritra ela isika tsy mihinan-kanina nefa noana dia lasa noana be. Lasa maka hery any anatin’ny tahirin’ny glucose-ny izy mba hampitoniana ny hahanoana anao mandritra ny fotoana fohy. Izay no antony mahatonga anao tsy mahare hanohanana intsony rehefa ela niaretana. Nefa mbola hiverina iny afaka fotoana fohy.
Rehefa tsy noana intsony isika dia efa ampy izay ny hery azon’ny vatana. Izay no antsoina hoe : fahafahampo. Izany hoe, tsy re intsony ny famantaran’ny hanohanana.
Rehefa mbola mihinana ihany isika nefa efa afa-po, dia mahazo hery miohatra noho ny ilainy ny vatana. Ataony inona izany hery miohatra izany ? Ho angoniny amin’ny endrika tavy izany, ao anatin’ny adipocytes, mba ho ampiasainy raha sendra misy hanohanana tsy raharahiana : rehefa tsy mihinan-kanina nefa noana.
Mibontsina ny adipocytes mba hahafahany mitahiry ny hery miohatra. Izay no mahatonga antsika mihangeza : mitombo volume.
Rehefa mihinan-kanina ambanin’ny fatran’ny hery ilain’ny vatana isika, dia tsy maintsy maka hery any amin’ny tahiriny izy : any amin’ny tavyany anatin’ny adipocytes.
Rehefa maka hery any anatin’ny adipocytes ny vatana dia mifintina izy ireo. Dia lasa mihena isika : mifintina na mihena volume. Izay no antony mampihena antsika haingana be amin’ny voalohandohan’ny régime.
Nefa misy fetrany ny zakan’ny adipocytes. Rehefa feno izy ireo nefa mbola mahazo hery miohatra ihany ny vatana, dia voatery mamorona adipocytes vaovao indray ny vatana. Amin’izay fotoana izay no lasa obèse ilay olona.
Tsy afaka ny ho esorina anefa ny adipocytes, mifintina fotsiny izy. Rehefa mihena izany ny olona osbèse dia tsy hiverina amin’ny vatany teo aloha intsony, izany hoe talohan’ny nahazoany adipocytes maro.
Nefa samy mihinan-kanina na dia tsy noana daholo isika noho ny :
Ny niainana tamin’ny fahazazana toa ny tsy fahampiam-pitiavana avy amin’ny ray aman-dreny, ny fikasihan-tanan’ny ray aman-dreny, ny fanolanana, ny fanambaniana avy amin’ny ray aman-dreny, ny terin’ny fiaraha-monina, ny fampifandraisana ny sakafo amin’ny fiadanana …
Ny terin’ny fiarahamonina izay manosika antsika hino fa misy lalàna izay mamaritra ny tsara bika ka ireo izay tsy mifanaraka amin’izay dia ratsy bika na tsy normal, sy amin’ny fametrahana lalàna izay mamaritra ny fomba fisakafohanana.
Ny régime izay manosika antsika hanena ny fatran’ny sakafo hanina (toa ny manisa kaloria, tsy mihinana raha tsy vary 2 sotro, … ohatra) na ny karazan’ny sakafo hanina (toa ny tsy fihinanana vokatra vita avy amin’ny ronono intsony ohatra, na vary, na paty, na ovy, … ohatra)